Arsenal Oo Guul Soo Laabasho Ah Ka Gaadhay Dhigeeda Tottenham, Emerick Aubameyang Oo Laba Gool Dhaliyay & Gunners Oo Derby LIX Gool La Iska Dhaliyay Ku Adkaatay. - Gool24.Net
Arsenal Oo Guul Soo Laabasho Ah Ka Gaadhay Dhigeeda Tottenham, Emerick Aubameyang Oo Laba Gool Dhaliyay & Gunners Oo Derby LIX Gool La Iska Dhaliyay Ku Adkaatay.
Arsenal ayaa guul weyn garoonkeeda Emirates kaga gaadhay kooxda uu xifaaltanka weyni ka dhexeeyo ee Tottenham kaddib ciyaar xiiso badan oo lix gool la iska dhaliyay.
Guushan ayaa ah mid uu gacanta ugu weyn ka qaatay Emerick Aubameyang oo laba gool u dhaliyay wiilasha Unai Emery waxaana uu kulankani dhibco wadaag ka dhigayaa labadan kooxood.
Kulanka ayaa ku bilawday qaab weerar iyo weerar celis ah isla markaana lasii saadaalin karayay inuu noqon doono kulan xiiso badan oo goolal door ah la is weydaarsan karo.
REKOODHE: Kulanka ayaan waxbadan socon markii Arsenal lagu abaalmariyay gool kulaad daqiiqadii 9-aad ee ciyaarta, Daafaca Spurs ee Vertonghen ayaa si ulakac ah gacanta ugu taabtay kubadda waana qaladka rekoodhaha ku sababay kooxdiisa.
GOOAL: Weeraryahanka ree Gabon ee Aubameyang ayaa usoo istaagay gool kulaadkan isaga oo dhammaystiray wixii qabyada ka ahaa isla markaana jihada qaldan u diray goolhaye Lloris.
Daqiiqadii 12-aad ee kulankan ayay Spurs ku dhawaadeen inay degdeg iskaga soo gudaan goolka bar-bardhaca, Garabka kooxdaas ee Son ayaa kubad xoogan ku bar-tilmaameedsaday goolka Bernd Leno balse goolhayaha Gunners ayaa ka bad-baadiyay.
Arsenal ayaa weerar deg deg ah ku qaaday Spurs, Saed Kolasinac oo kulamadii ugu dambeeyay kusoo bilaabanayay ayaa kubad usoo tuuray Alex Iwobi kaas oo markiisa darbad ku tijaabiyay Lloris balse shabaqa gaadhsiin waayay.
CAJIIB: Son Heung Min oo kulankan halis ku ahaa Arsenal ayaa darbad ku beegay diilinta hoose ee birta goolka balse waxa markiisa bad-naado sameeyay Leno.
GOOAL: Tottenham ayaa dadaalkii ay ugu jirtay inay la timaado bar-bardhaca goolka looga naxsaday heshay daqiiqadii 30-aad ee kulanka, Eric Dier ayaa madax qurux badan ku dhammaystiray kubad gees katuur ahayd oo uu ka helay Christian Eriksen.
REKOODHE: Spurs ayaa markooda lagu abaalmariyay gool kulaad, Daafaca da’da yar ee Rob Holding ayaa ahaa shaqsiga qaladka ku galay Son.
GOOAL: Soo laabasho degdeg ah!!, Wiilasha Mauricio Sarri ayaa afar daqiiqo kaddib goolkii bar-bardhaca la yimid goolka labaad waxaana gool kulaadkii gool u bedelay Harry Kane.
Qaybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay bar-bardhac ay hoggaanka haysay kooxda martida ahayd ee Tottenham, Qaybtan ayaa sidoo kale ahayd mid qaladaad iyo dagaal badani ka dhex muuqdeen waxaana cadayn buuxda u ah in laba rekoodhe la kala helay.
Tottehman ayaa markale kusoo laabatay qaab xoogan, Harry Kane ayaa qarka u fuulay inuu gool quus goyn ah ka dhaliyo Arsenal balse waxa gacan kaliya goolka kaga saaray darbadiisa goolhaye Leno.
GOOAL: Markale Aubameyang, Weeraryahanka ree Gabon ayaa markale kor usoo qaaday madaxa jamaahiirta Arsenal isla markaana inuu xataa dhaqaaq sameeyo u diiday goolhaye Lloris kaddib caawin uga timid Ramsey.
Lucas Torreira ayaa ku sigtay inuu shabaqa Tottenham la gaadho goolkiisii ugu horreeyay ee kooxdiisa, Isku daygii Ramsey ee uu diilinta goolka kasoo celiyay Dele Alli ayuu darbad kale u bedelay Torreira balse bar-tilmaameedkiisa ayaa birta gees maray.
GOOAL: Kaddib dadaal xoogan oo ay u galeen inay hoggaanka kulanka la wareegaan, Alexandre Lacazette oo keydka kasoo kacay ayaa gool uu si fiican uga habaystay da’yarka Foyth halka hoose ee goolka ka xareeyay kubadda.
GOOAL: Sidii Duufaantii!!, Saddex daqiiqo kaddib goolkii Lacazette, Haddiiba Lucas Torreira uu hore ugu dhawaaday inuu goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyo kooxdiisa Arsenal waxa uu markan si habsami leh goolhaye Lloris u dhinac mariyay darbad xoogan isaga oo kulanka u rogay mid 4-2 ah.
Intaa kaddib ciyaarta ayaa noqotay mid ay hoggaan buuxa la wareegtay Arsenal, Wiilasha Unai Emery ayaa si xoogan u maamulay ciyaarta.
Daafaca Vertonghen oo ahaa shaqsigii gool kulaadkii hore galay ayaa kaadhka cas loo taagay kaddib qalad kale oo uu ku galay Lacazette.
Si kastaba ha ahaateee, Kulankan ayaa kusoo dhammaaday natiijo 4-2 ah oo ay guul weyn kusoo hoysay kooxda martida loo ahaa ee Arsenal